Nvidia dia manolotra ny GeForce RTX 2060 sy ny FreeSync Support | Avy amin'ny Linux
Ny CES no toeram-pivoriana manerantany ho an'izay rehetra miroborobo amin'ny sehatry ny haitao mpanjifa. Izy io dia niasa ho porofom-baovao ho an'ireo manavao sy ny haitao farany ambany nandritra ny 50 taona, io no sehatra eran-tany itondrana ny fanavaozana ny taranaka ho avy.
Amin'ity CES vaovao 2019 ity, ny NVIDIA dia nanararaotra nanao ny fanambarana tamin'ity hetsika ity izay nisafidianan'izy ireo hanolotra ny karatra sary vaovao antonony, ny NVIDIA GeForce RTX 2060.
1 Momba ny NVIDIA GeForce RTX 2060
1.1 Fanohanana teknolojia FreeSync
Momba ny NVIDIA GeForce RTX 2060
Ny mpikambana vaovao sy farany mora indrindra amin'ny andiany RTX 20 Ny firoboroboan'ny vokatra mari-trano dia mitohy mankany amin'ny sehatra avo lenta sy mora kokoa.
Natao hanomezana fampisehoana manodidina ny GeForce GTX 1070 Ti, ny karatra vaovao dia hamidy amin'ny besinimaro amin'ny herinandro manomboka ny 15 Janoary, miaraka amin'ny $ 369 Euros ny vidiny.
Toa izany Ny GeForce RTX 2060 dia mifototra amin'ny kinova ambany-down an'ny GPU TU106 izay efa ampiasaina ao amin'ny GeForce RTX 2070.
Mahatalanjona izany satria hatreto, NVIDIA dia nampiasa GPU hafa isaky ny karatra RTX (TU102 / 2080TI, TU104 / 2080, TU106 / 2070), manao azy ho karatra voalohany amin'ny karazany ao amin'ny fianakaviana.
Fanovana ny satan'ireo antoko koa izany GeForce xx60 amin'ny ankapobeny, izay nentim-paharazana dia nanasongadina ny GPU manokana, miaraka amin'ny NVIDIA izay ampidinina hampihena ny vidiny.
Ankoatra izany, Amin'ity fihaonambe ity dia nanararaotra ny fampifanarahana ny teknolojia FreeSync ry zalahy Nvidia mba hanao ilay fanambarana (VESA Adaptive-Sync), izay ahafahan'ny karatra horonan-tsary manova ny tahan'ny fanavaozana ny monitor mba hahazoana sary milamina sy milamina mandritra ny lalao.
FreeSync dia teknolojia fampifanarahana adaptive ho an'ny fampisehoana LCD izay manohana ny taham-pahavitrihana mavitrika mba hampihenana ny triatra sy ny fangirifiriana ateraky ny tsy fitoviana amin'ny tahan'ny atiny.
FreeSync dia novolavolan'ny AMD ary nambara voalohany tamin'ny 2014 hifaninana amin'ny G-Sync an'ny tompona Nvidia.
Ity haitao ity dia mampifanaraka ny tahan'ny haingam-pandrefesana amin'ny zana-kazo miovaova, izay vokatry ny tsy fitoviana GPU rehefa manamboatra atiny kilalao sarotra, ary koa ny 23.97 / 24 / 29.97 / 30 fps ambany ampiasain'ny atiny video raikitra.
Fanohanana teknolojia FreeSync
Amin'ny fomba ofisialy, fanohanana amina maodely am-polony fotsiny no efa nambara, saingy Ny NVIDIA dia hamela ny FreeSync hihetsika amin'ny tanana ho an'ny mpanara-maso rehetra tsy an-kanavaka. Ny FreeSync amin'ny NVIDIA dia tsy hiasa afa-tsy amin'ny karatra horonantsary Pascal na avo kokoa (Volta, Turing).
Ny antony nibaikoana io fanapahan-kevitra io dia toa ny isan'ny maodelin'ny monitor FreeSync eo amin'ny tsena mihoatra ny maodely G-Sync amin'ny alàlan'ny baiko lehibe iray.
Ny mpamily an'ny Windows miaraka amin'ity fanohanana vaovao ity dia havoaka afaka herinandro, ka tsy mbola nisy tatitra momba ny mpamily ho an'ny Linux, Koa satria ny G-Sync dia mifanaraka amin'ny Linux ihany koa, afaka manantena fanampiana izahay amin'ny FreeSync.
Mbola tsy fantatra raha ny fanohanana FreeSync amin'ny lafiny NVIDIA dia natao ho an'ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo DisplayPort na HDMI izay hiasana amin'izy roa.
Farany, teboka iray azo avotana indray ao amin'ny CES 2019, dia ny NVIDIA izay nanao tamin'ity fihaonambe ity ny fanambarana karazana karatra sary vaovao ho an'ny solosaina finday.
Izay Nampahafantarina ny fandefasana maodely kahie 40 eo ho eo, ka hatramin'ny 17 no maodely Max-Q.
Araka ny filazan'i Jen-Hsun, CEO an'ny NVIDIA, ny MSI GS65 Stealth misy RTX 2080 Max-Q GPU dia haingana kokoa noho ny GPU birao 1080 amin'ny taranaka ho avy.
Nambarany ihany koa fa ny rafitra dia haingana indroa noho ny PlayStation 4 Pro miaraka amin'ny fahafaha-mihazakazaka Battlefield V miaraka amin'ny haitao Nvidia's Ray Tracing afaka 60 frames isan-tsegondra.
Raha tsy misy resaka intsony dia mila miandry fotsiny ny fanambarana ny fanohanan'ny Freesync ho an'ny Linux isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Nvidia dia manolotra ny GeForce RTX 2060 sy ny fanohanana FreeSync